दशैंको बेलामा प्याजको कालोबजारी शुरु, लुकाएर राखेको २ सय बोरा प्याज कालिमाटीबाट बरामद - देश विकास डटकम
सोमबार कालिमाटी स्थित तरकारी बजारबाट कालोबजारीका लागि व्यापारीले लुकाएर राखेको २ सय बोरा प्याज बरामद भएसँगै प्याजको कालोबजारी सुरु हुन थालेको हो । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको चारवटा टोलीले कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिमा अनुगमन गर्दा उक्त परिमाणको प्याज बरामद भएको थियो ।
बजार अनुगमनका क्रममा व्यापारीहरुले अत्याधिक मुल्य बढाएको र प्याज लुकाएको भेटिएपछि कालिमाटीका तरकारी व्यापारीसँग विभागले स्पष्टिकरण समेत सोधेको छ। केही दिनयता नेपाली बजारमा प्याजको मूल्य लगातार बढिरहेको छ । आइतबार भारतले प्याज निर्यातमा प्रतिवन्ध लगाएपछि नेपाली बजारमा यसको प्रभाव समेत देखिएको छ ।
काठमाडौंका व्यापारीले सोमबार नै प्याजको खुद्र मूल्यमा प्रतिकिलो न्यूनतम रु ३० बढाएका छन् । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आइतबार रु. १०५ प्रतिकिलो विक्री गरेको थियो तर सोमबार प्याजको मूल्य प्रतिकिलो रु. १३५ तोकिएको थियो ।
भारतमा यसवर्ष प्याजको उत्पादन घटेको र त्यही कारण मूल्य चर्किंदै गएपछि उसले प्याज निर्यातमा रोक लगाएको हो ।नेपालमा खपत हुने ९५ प्रतिशत बन्दा बढी प्याज भारतबाट आउँछ ।
नेपालमा भारतबाट मात्र वार्षिक रु. २ अर्बभन्दा बढीको प्याज आयात हुँदै आएको छ। चाडपर्वको मुखमा प्याजको भाउ बढ्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन्।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार भदौ १५ मा प्याज प्रतिकिलो ५९ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। असोज पहिलो साता यसको मूल्य झण्डै दोब्बर भएको छ। चाडबाडका बेला प्याजको चरम अभाव हुने समेत देखिएको छ ।
← त्रिकोणात्मक टी २० सिरिज अन्तर्गत जिम्बाब्वेलाई हराउँदै इतिहास रच्ने दाउमा नेपाल
बाजुराको स्याउ पहिलोपटक राजधानीमा →
धादिङ्गको गल्छि गाउँपालिका स्थित रानिमालामा होमस्टे व्यवस्थापन सम्बन्धी ७ दिने तालिम सञ्चालन
१८ असार २०७६, बुधबार १९:१७ Saroj Poudel 0
आइपिएल क्रिकेटको उपाधिमा चेन्नाईको ह्याट्रिक, सेन वाट्सनको शतकीय पारी
१४ जेष्ठ २०७५, सोमबार ०८:३० Deepa Poudel 0
राप्रपाका सबै धारहरुलाई एक हुन पशुपति शम्शेरको अपिल ( विज्ञप्ती सहित )
१० बैशाख २०७५, सोमबार १४:३५ Saroj Poudel 0